(၄)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်စာစောင်အတွက် မန်ဘာတို့ရဲ့စကားသံများ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ကြော်ငြာချက်များ > အသိပေးချက်များ > (၄)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်စာစောင်အတွက် မန်ဘာတို့ရဲ့စကားသံများ
View Full Version : (၄)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်စာစောင်အတွက် မန်ဘာတို့ရဲ့စကားသံများ
ဆရာထင်ဟာ ဝင်လာတာနဲ့ ဝိုင်းဝိုင်းဒိုင်းဒိုင်းပါပဲ။ ဆရာထင့် စေတနာအမြင်ဟာ၊ ကျွန်တော့်အယူအဆနဲ့ ထပ်တူဖြစ်နေသမို့၊ ဝမ်းသာအားရစွာ ပြောပါရစေ။ နိုင်ငံတခုရဲ့ ထုတ်ကုန်ကဏ္ဍကို၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ agriculture sector, စက်မှုကဏ္ဍ industrial sector နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ service sector ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ၊ သစ်တော၊ မွေးမြူရေးနဲ့ ရေထွက် ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုတွေကို၊ ထည့်သွင်းတွက်ချက်သလို၊ စက်မှုကဏ္ဍမှာတော့ စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်မှုတွေအပြင်၊ ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့နဲ့ အစရှိတဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ် mineral resources ဆိုင်ရာ၊ တူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုတွေလည်း၊ ပါဝင်ပါတယ်။
(၂၀၀၈ ~ ၂၀၀၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ မြန်မာပြည်ဝင်ငွေရဲ့ (၄၀ %) ကျော်ကို၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှ ရရှိပြီး၊ (၁၆ %) ကျော်ကိုတော့ စက်မှုကဏ္ဍမှ ရရှိတယ်လို့၊ သိရပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေရဲ့ သုံးပုံ တပုံကျော်ကို၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှ ရရှိတဲ့အတွက်၊ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားရတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင် (၁၉၃၈) ခုနှစ်စာရင်းတွေအရ၊ မြန်မာပြည် ဝင်ငွေရဲ့ (၄၅. ၈ %) ဟာ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှ ရရှိပြီး၊ (၂၀၀၈ ~ ၂၀၀၉) ခုနှစ် စာရင်းတွေအရ၊ ဝင်ငွေရဲ့ (၄၁. ၇ %) ကိုစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှ ရရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေါါတ် (၁၉၃၈) ခုနှစ် စာရင်းတွေအရ၊ လုပ်သားအင်အား (၆၉. ၆ %) ဟာ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ၊ လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ လက်ရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ စာရင်းတွေအရ၊ (၂၀၁၀) ခုနှစ်အထိ လုပ်သား အင်အားရဲ့ (၆၁. ၆ %) ဟာ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍမှာ၊ လုပ်ကိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ (၂၀၁၀) ခုနှစ်လူဦးရေ population ကို သန်း (၆၀) လို့အကျဉ်းဖျဉ်းသိရပေမယ့်၊ (၁၉၃၈) ခုနှစ် လူဦးရေကတော့ သန်း (၂၀) ခန့်သာရှိပါလိမ့်မယ်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှ ထုတ်ကုန်တွေဟာ၊ စက်မှု နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့၊ value added production နည်းပါးပြီး၊ primary form products ဆိုတဲ့ မူလကုန်ကြမ်းထုတ်ကုန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ နှစ်ပေါင်း (၅၀) ခန့် နောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့တာကို၊ ငြင်းမရအောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါ၊ 'ကုန်ထုတ်စွမ်းအားပိုမိုသာလွန်တဲ့ စက်မှုကဏ္ဍသို့ ကူးပြောင်းသွားနိုင်ခြင်း' ဆိုတဲ့၊ အချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ စက်မှု နဲ့ နည်းပညာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အခါ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ သမာရိုးကျ ထုတ်လုပ်မှုတွေကို၊ အသုံးပြုစရာမလိုတော့ပဲ နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ တန်ဖိုးမြှင့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် value added agricultural products တွေကို၊ လုပ်သားအင်အား အများအပြား၊ အသုံးပြုစရာမလိုပဲ အချိန်တိုအတွင်း၊ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စက်မှုနည်းပညာတွေကို အသုံးပြုထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ service sector ဟာလည်း၊ အချိန်တိုအတွင်းမှာ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်တဲ့အတွက်၊ ဝင်ငွေမြင့်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော်ရှိနေခဲ့တဲ့ သမာရိုးကျစိုက်ပျိုးရေးအခြေခံ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် unskilled labor intensive based agriculture social-economic environment structure ကို၊ skilled labor intensive based industrial social-economic environment structure ဆိုတဲ့ စက်မှုအခြေခံလူမှုစီးပွားရေး ပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်၊ ပြောင်းလဲတဲ့ အခါ၊ စနစ်ကျပြီး၊ လက်တွေ့အသုံးတည့်မယ့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ၊ vocational eduction ကဏ္ဍတွေကို၊ ပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ vocational eduction မှ အတတ် ပညာရှင်တွေကို၊ မွေးထုတ်ဖို့လိုအပ်မယ့် အချိန်အတိုင်းအတာဟာ တိုတောင်းပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ academic eduction မှ အသိပညာရှင်တွေကို၊ မွေးထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ vocational eduction နဲ့ academic eduction ကိုအချိတ်အဆက် မိမိ၊ ဟန်ချက်ညီစွာ ပြုစုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ စက်မှုအခြေခံလူမှုစီးပွားရေး ပတ်ဝန်းကျင်ကို၊ အထောက်အကူပေးနိုင်ပြီး၊ စစ်မှန်တဲ့ မိုက်ခရိုဘောဂဗေဒ micro-economics မူဝါဒတွေကို၊ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်တတ်ဖို့၊ လိုပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ ဥပဒေ၊ တိကျတဲ့မူဝါဒ၊ ထိရောက်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေအပါအဝင်၊ အခြေခံအဆောက်အဦတွေဖြစ်တဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ရေ၊ မီးအပါအဝင် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း၊ ဖြည့်စည်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ FDI foreign direct investment နိုင်ငံခြားမှတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုတွေ၊ IMF, Wold Baknk နဲ့ ADB လို ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီတွေလည်း၊ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ နိုင်ငံတနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်သက်သက်မဟုတ်သလို၊ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ဟာ မှန်ကန်တဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ ထိရောက်တဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှုကိုသာပေးနိုင်ပါတယ်။ အောင်မြင်ဖို့လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရမှာကတော့၊ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ရိက္ခာလစာကိုရယူထားသူ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေပါသလို၊ ကဏ္ဍစုံမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးလည်း၊ ပါဝင်ပါတယ်။
ယခုကာလမှာ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်နေရာတော့ ရောက်နေပါပြီ။
အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးထားတာလေးတွေ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။
ကြားဖူးတာပေါ့လေ........နယူးယောက်နဲ့ ဘေဂျင်းဟာ လေထုညစ်ညမ်းမှု အမြင့်မားဆုံးပဲလို့တော့ သိထားပါတယ်။စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်လာတာတွေရဲ့နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ ရလာဒ်လေးတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ လုံးဝ ပစ်ပယ် မေ့ဖျောက်ထားလို့ မရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်ပါ။
GREEN TECHNOLOGY ကို ကောင်းကောင်းသုံးနိူင်တာ အမေရိကားပဲရှိသေးတယ်လို့ လေ့လာထားရပါတယ်။
GREEN TECHNOLOGY နဲ့ အတူ ECO ပိုင်းကလဲ ကပ်ပါလာပါတယ်။ ( အညမညပေါ့လေ )
မြန်မာပြည်လို တိုင်းပြည်အတွက် စက်မှုထွန်းကားတိုးတက်ရေးနဲ့အတူ GREEN ကိုပါ တစ်ပါထဲ ဆောင်ရွက်သွားရင် နောင် အနှစ်(၂၀)မှာ ကြုံတွေ့လာရမယ့် ဆိုးကျိုးတွေလျှော့နည်းသွားမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
သူတစ်ကာလိုလဲ ဓနအင်အားကို အပြည့်အ၀ထည့်ဝင် သုံးစွဲမှုမဟုတ်ဘဲ အတိုင်းအတာ တစ်ရပ်လောက်ပဲ ဆောင်ရွက်မယ်ပေါ့.........
SOFT POWER လို SOFT GREEN လေးပေါ့......။
green technology ဟာ၊ clean technology လို့ခေါါတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ environmental technology နည်းပညာလို့ နားလည်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု environmental pollution ကိုလျှော့ချတဲ့နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မှာ green technology နဲ့ ပက်သက်ပြီးရေးသားထားတဲ့၊ post တွေလည်းရှိပါတယ်။ green technology ကို၊ လူတဦးခြင်းဝင်ငွေမြင့်မားပြီး၊ ဓနအင်အားကြီးမားတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာလည်း၊ အပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်ခြင်း မရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ green technology ကို၊ အပြည့်အဝ မသုံးမချနိုင်ခြင်းဟာ၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိအမြင်နဲ့လည်း၊ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
public awareness အဖြစ်၊ ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်လာစေဖို့၊ publicity ဆိုတဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ regulations တွေကို၊ သတ်မှတ်ပြဌာန်းရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်စည်းရုံးပညာပေးခြင်းနဲ့ အရေးယူခြင်းတွေကိုလည်း၊ အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ charisma လို့ခေါါတဲ့ စည်းရုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စာရေးဆရာတွေ၊ ရုပ်ရှင်ပညာရှင်တွေနဲ့ ဂီတပညာရှင်တွေ၊ အစရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဟာ၊ public awareness အပိုင်းကို၊ အမျိုးသားရေးတာဝန်တရပ်လို သဘောထားပြီး၊ စည်းရုံးပညာပေးခြင်းတွေ၊ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်လို တိုင်းပြည်အတွက် စက်မှုထွန်းကားတိုးတက်ရေးနဲ့အတူ GREEN ကိုပါ တစ်ပါထဲ ဆောင်ရွက်သွားရင် နောင် အနှစ်(၂၀)မှာ ကြုံတွေ့လာရမယ့် ဆိုးကျိုးတွေလျှော့နည်းသွားမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ သူတစ်ကာလိုလဲ ဓနအင်အားကို အပြည့်အ၀ထည့်ဝင် သုံးစွဲမှုမဟုတ်ဘဲ အတိုင်းအတာ တစ်ရပ်လောက်ပဲ ဆောင်ရွက်မယ်ပေါ့.........
အထက်မှာ ကိုဇင်မောင်ထွန်းပြောတဲ့ ECO ဟာ Economics ဆိုတဲ့ ဘောဂဗေဒလား၊ Ecology လို့ခေါါတဲ့ ဂေဟဗေဒလား၊ မသေခြာပေမယ့်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဂေဟဗေဒစနစ်တွေကို၊ အတတ်နိုင်ဆုံးထိမ်းသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင် green technology ကို၊ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဂေဟဗေဒစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဟာ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ခန့် အချိန်ယူရပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ကိုးခရိုင်စိမ်းလမ်းစိုပြေရေးစီမံကိန်းလို၊ FREDA - forest resource environment development and conservation association ဆိုတဲ့ NGO အသင်းမှ၊ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ Mangrove Reforestation - ဒီရေရောက်တောများထိန်းသိမ်းရေး စီမံကိန်းလို၊ ဂေဟဗေဒစနစ်တွေကို ပြန်လည်စောင့်ရှောက်၊ အစားထိုးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာ၊ green technology ကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဂေဟဗေဒစနစ်တွေကို ပြန်လည်စောင့်ရှောက်ခြင်းမှာ wildlife protection ဆိုတဲ့ သဘာဝတောရိုင်း တိရိစ္ဆာန်တွေကို၊ ထိမ်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဂေဟဗေဒစနစ်တွေကို ပြန်လည်စောင့်ရှောက်တဲ့အခါ၊ စာရင်းဇယားကအစ၊ မှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတိုက်ဆိုင်လို့၊ အစားထိုးသစ်ပင်စိုက်ပျိုးမှုအကြောင်းလေးကိုလည်း၊ ပြောပါရစေ။ အညာဒေသမှ ကန္တာရဆူးပင်တို့၊ အောက်အရပ်မှ မလေးရှားပိတောက်တို့ဟာ၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ မူလမျိုးရင်းသဘာဝပေါက်ပင်တွေ မဟုတ်ပဲ၊ အခြားတိုင်းပြည်များမှ၊ တင်သွင်းလာတဲ့ သဘာဝပေါက်ပင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကန္တာရဆူးပင်ကို လွပ်လပ်ရေးခေါါတ်ဦး ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီခေါါတ်မှာ တင်သွင်းခဲ့သလို၊ မလေးရှားပိတောက်ကိုတော့ ကိုးခရိုင်စိမ်းလမ်းစိုပြေရေးစီမံကိန်းမှ၊ တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကန္တာရဆူးပင်နဲ့ မလေးရှား ပိတောက်တို့ဟာ ရေစုတ်ယူအားကောင်းတဲ့ အပင်တွေဖြစ်ပြီး၊ မျိုးပွားမှုနှုံးလည်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်မှ မူလမျိုးရင်းသဘာဝပေါက်ပင်တွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်း၊ ထိခိုက်စေပါတယ်။
လောလောဆယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ ဓနအင်အားအရ၊ green technology ကိုအပြည့်အဝမသွားနိုင်ပေမယ့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတဲ့ waste management ကို၊ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ waste management မှာ၊ renewable energy, water purification, air purification, sewage treatment, environmental remediation, solid waste management နဲ့ energy conservation ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍတွေရှိတဲ့အနက်၊ အလယ်အလတ်တန်းစား ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ၊ water purification, air purification နဲ့ solid waste management ကဏ္ဍတွေကို၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့၊ regulations တွေပြဌာန်းသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျောက်မီးသွေးလောင်စာသုံး၊ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံတွေမှာ scrubber unit တွေတတ်ဆင်ပြီး၊ air purification အနေနဲ့ pollution ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အခြား စားသောက်ကုန်၊ ရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်း၊ environmental remediation ဆိုင်ရာတွေကို၊ အတိအကျ မဆောင်ရွက်နိုင်သေးတဲ့အခါ၊ solid waste management နဲ့ water purification တို့ဖြင့်၊ pollution ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ regulations တွေပြဌာန်းပြီးတဲ့အခါ authorization ဆိုတဲ့ အာဏာပိုင်အပိုင်းမှ၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ အရေးယူခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ၊ air pollution လျှော့ချဖို့ 'Emission standards' တွေကို၊ regulations အဖြစ် ပြဌာန်းထားပါတယ်။ nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides, particulate matter (PM) လို့ခေါါတဲ့ soot နဲ့ carbon monoxide (CO) သို့မဟုတ် volatile hydrocarbons တွေကြောင့် air pollution ဖြစ်ပေါါရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း air pollution ကို ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ mono-nitrogen oxide တနည်းအားဖြင့် nitric oxide (NO) နဲ့ nitrogen dioxide (NO2) အစရှိတဲ့ NOx တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ လျှော့ချနိုင်ဖို့ ကြိုတင်စဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်။ ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ဆိုတဲ့ greenhouse effect ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ nitrous oxide (N2O) နဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုဆိုတဲ့ air pollution ကို ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ (NOx) တို့ကို၊ ရောထွေး မှတ်သားတတ် ပါတယ်။ NOx ထွက်ပေါါလာမယ့် primary sources တွေကို thermal NOx, fuel NOx နဲ့ prompt NOx ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
thermal NOx ဟာ၊ high temperature oxidation ကြောင့်ဖြစ်ပေါါပြီး၊ fuel NOx ကတော့ combustion ကြောင့်ဖြစ်ပေါါပါတယ်။ fuel NOx ဟာ NOx ထွက်ပေါါမယ့် အဓိက major source ဖြစ်ပါတယ်။ Prompt Nox ကတော့ combustion ရဲ့ earliest stage မှာဖြစ်ပေါါပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေဆဲ မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်တွေနဲ့ generator engine ဆိုတဲ့ မီးစက်အင်ဂျင်တွေအပါအဝင်၊ internal combustion engine တွေမှာ NOx ကို လျှော့ကျစေဖို့၊ နည်းပညာပိုင်းအရ ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားခြင်းမရှိတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ NOx နဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ regulations တွေပြဌာန်းလိုက်တဲ့အတွက်၊ မြန်မာပြည်အတွင်းသို့၊ ဈေးပေါပေါအလုံးအရင်းနဲ့ အသုံးပြုခွင့်မရှိတော့တဲ့၊ သုံးလက်စ used မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ generator engines တွေ ဝင်ရောက်လာနိုင်သလို၊ အသုံးပြုခွင့်မရှိတော့တဲ့၊ အသစ်ထုတ်လုပ်ပြီးသား brand new မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ generator engines တွေ လည်း၊ ဝင်ရောက်လာမယ့် အလားအလာတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ ကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြုပေး ဘီလို့ ဟိုတလောက သတင်းစာမှာ ဖတ်ရတယ်ဗျ ။ ဒါပေမယ့် ခုထိ ကော်မတီမှာ ဘယ်သူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာတော့ ကျနော်မတွေ့သေးဘူးဗျ ။ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး တဦးဦး ကတော့ ဥက္ကဌ တာဝန်ယူရမယ်လို့ သတင်းစာမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် ။
ဒါကတော့ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေပါဝင်တဲ့ အေပရယ်ဖူးဒေး မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာပါခင်ဗျာ ...
ကျွန်တော်အမှတ်မမှားဖူးဆိုရင်တော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့လက်ထက်တုန်းကလား၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအဖွဲ့ လက်ထက်တုန်းကလား၊ တော့မသိတော့ပါဘူး။ ကော်မတီဥက္ကဌဟာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဌာနနဲ့ သစ်တောဌာနမှ၊ အရာထမ်းတွေကော်မတီဝင် အဖြစ်ပါရှိခဲ့ပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာကို ဘာသာရပ်အနေနဲ့ဆိုရင် ကြောင်းကျိူးဆက်စပ်ပြီး လက်တွေ့ကျကျလုပ်ဆောင်ရတဲ့ ဘာသာရပ်လို့မြင်ပါတယ်..။ ပညာရပ်အနေနဲ့ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် လူတွေရဲ့ဘ၀တွေ အဆင်ပြေပြေသွားလာလှူပ်ရှားဖို့ နောက်ကွယ်ကနေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ ပညာရပ်တွေလို့မြင်ပါတယ်..။ ဥပမာ။ ။ လူတွေက Lift တွေကိုပဲမြင်တယ်ပေါ့..။ လူတွေအဆင်ပြေပြေတက်လို့ ဆင်းလို့လွယ်အောင် လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့..။ သာမန်လူရဲ့ အသိအနေနဲ့ဆို ဒါပဲ..။ ဒီ့ထက်မပိုဘူး..။ အင်ဂျင်နီယာရဲ့ အမြင်နဲ့ကျတော့ ဒီလိုအဆောက်အဦးမှာ ဘယ်လောက်ဆွဲအားရှိတဲ့ Lift ကိုတပ်မလဲ..။ ဘယ်လိုတည်မလဲ..၊ ဘာတွေတပ်ဆင်မလဲ..၊ ဘယ်လိုအန္တရာယ်ကင်းအောင် လုပ်မလဲဆိုတဲ့ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းတွေ အများကြီးပါလာပြီပေါ့..။ ဒါကြောင့်မို့ အင်ဂျင်နီယာလို့ဆိုလိုက်ရင် လူတွေရဲ့ဘ၀ကို အဆင်ပြေစေဖို့ နည်းပညာနဲ့ အထောက်အကူပေးနေတဲ့သူတွေလို့ မြင်ပါတယ်..။
တကယ်တော့ ဒီနှစ်စပိုင်းမှာ ကိုယ့်အပူနဲ့ကိုယ်မို့ ဖိုရမ်ထဲကို မ၀င်ဖြစ်တာကြာပါပြီ..။ မနှစ်က နိုဝင်ဘာကနောက်ဆုံးဝင်ဖြစ်တာပဲ..။ ဒါပေမယ့် တစ်ခြားတွေမှာ ၀င်နေဖြစ်လို့လားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ဘူး..။ ဘယ်မှာမှကို မ၀င်ဖြစ်တာ..။ အော်.. ဒါပေမယ့် နှစ်ပတ်လည်စာစောင်ရှိမှန်းတော့ အစ်ကိုထွန်းနဲ့ ဖုန်းမကြာမကြာဆက်ဖြစ်လို့ သိတယ်..။ ဒီနှစ်စာစောင်မှာ စာတစ်ပုဒ်တော့ပါအောင်ရေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ မှန်းထားခဲ့ဘူးတာလည်း အမှတ်ရတယ်..။ လူတွေကို မျှဝေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဒီဖိုရမ်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး..။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ အင်ဂျင်နီယာတွေချည်းပဲ..။;););) အင်ဂျင်နီယာတွေတွေ့တိုင်း အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ကိုဝင်ပြီး မျှဝေဖို့ ဖိတ်ခေါ်မိပါရဲ့..။ ဒါပေမယ့် လူကအမျိူးမျိူး..၊ ၀ါသနာ၊ဗီဇ၊ ဓလေ့၊ အထုံတွေက အမျိူးမျိူးကိုး..။ တကယ့်လုပ်ငန်းကောင်းကောင်းမှာ လခကောင်းကောင်း ရာထူးကြီးကြီးနဲ့လုပ်နေတဲ့အစ်ကိုကို ဖိုရမ်မှာဝင်ပြီးစာရေးပေးပါလားလို့ ခေါ်ဘူးတုံးက သူ့မှာဘယ်မှဝင်ဖို့မအားပါဘူးတဲ့..။ အလုပ်ပိတ်ရင် သမီးနှစ်ယောက်က ကူထိန်းရသေးတယ်တဲ့..။ အလုပ်ကလည်း မိုးလင်းမိုးချူပ်သွားရသေးတယ်တဲ့..။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက ဈေးကွက်ဂျာနယ်ကိုတော့ ဖွင့်ပြတယ်..။ ပိုက်ဆံရှိရင် အိမ်ဝယ်၊ မြေကွက်ဝယ်ဖို့ပဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ်တဲ့..။ သူ့ကိုကြည့်ပြီးနှမြောလိုက်တာ..။ ဒါပေမယ့်သူ့ဘာသာသူတော့ ဟုတ်နေတာပါပဲ..။ အလုပ်တွေအားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်တယ်...။ တစ်နှစ်ပြည့်ရင် မြေကွက်ဝယ်လိုက် ၊ အိမ်ဝယ်လိုက်လုပ်တယ်..။ ဒါပဲ..။ စာရေးဖို့ စိတ်မ၀င်စားအားဘူး..။
ဒါပေမယ့် နောက်ဦးလေးတစ်ယောက်ကတော့ အလုပ်လည်းမိုးလင်းကမိုးချူပ်လုပ်တယ်..။ စနေ၊တနင်္ဂနွေမှာ ပရဟိတအလုပ်ကို အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်တယ်..၊ ညတွေလည်း မအိပ်မနေစာရေးတယ်...။ အလှူအတန်းတွေရဲ့စာရင်းရှင်းတန်းတွေကိုလည်း သေချာအသေးစိပ်ကစလုပ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာဦးလေးတစ်ယောက်နဲ့လည်း အပြင်မှာရင်းနှီးခွင့်ရလိုက်တဲ့အခါ ဒီလိုလူတွေရှိတာ တော်ပါသေးရဲ့လို့ပဲ..။ သူက သူ့ဘလော့ကနေလည်း ပညာရပ်တွေ အခမဲ့ရေးပြီးဖြန့်တယ်..။ သူ့ကိုတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်တာလေးကူလုပ်ပေးရင် သူတို့လိုကိုယ်ကျိူးမဖက်..၊ ငွေတွေတိုးပွားဖို့ချည်း အာရုံစိုက်နေတဲ့သူမဟုတ်တဲ့သူတွေ ရှိပါသေးလားလို့ တွေးမိလို့ သက်သာရာရပါသေးတယ်..။
ဖွံ့ဖြိူးမှုကိုတိုင်းတာတဲ့ Criteria တွေကို မသိဘူး..။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံကို တစ်နိုင်ငံလုံး မီးလုံလုံလောက်လောက်လင်းစေချင်တယ်..။ ထင်းမီး၊ မီးသွေးမီးတွေ မသုံးစေချင်ဘူး..။ သစ်တောတွေပြုန်းတီးတာ စိတ်မချမ်းသာလွန်းလို့..။ မသင်မနေရမူလတန်းပညာရေးဆိုတာထက်.. အခမဲ့မူလတန်းပညာရေးကို လုပ်စေချင်တယ်..။ စာမတတ်တဲ့ကလေးမိဘတွေကို ကလေးတွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်..ဆိုတဲ့ရက်တိုသင်တန်းလေးတွေပေးစေချင်တယ်..။ တက္ကသိုလ်ရောက်သွားတဲ့ကလေးတွေကို အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေဖန်တီးပေးထားစေချင်တယ်..။ ရန်ကုန်မဟုတ်တဲ့ နယ်ကလိုင်းကားရှိတဲ့လမ်းတွေတိုင်းမှာ ဇရပ်လိုမျိူးနဲ့ သောက်ရေအိုးစင်၊ အိမ်သာတွေရှိစေချင်တယ်..။ ဖြစ်နိုင်ရင် အိမ်မှာတူတွေချည်းပဲရှိတာမို့ အသက် ၁၈ နှစ်လောက်မှာ စစ်ပညာသင်ကြားစေချင်တယ်..။ သူတို့ကို ကိုယ်ကာယနဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ကြံ့ခိုင်စေချင်တယ်..။ ယောင်လည်ယောင်လည်နဲ့ စိတ်ကစားနေကြမှာမျိူး..၊ အသုံးအစွဲကြီးကြီးနဲ့ ပေါ်ကြော့နေကြမှာမျိူး မဖြစ်စေချင်ဘူး..။
မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ရာခိုင်နှူန်းကြီးကြီးနဲ့ အရေးပါလှပါတယ်..။ ရှိပြီးသားမြို့ကြီးတွေမှာကို ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ဖို့..၊ မိလ္လာကောင်းကောင်းသိမ်းဆည်းဖို့..၊ အမှိူက်စနစ်တကျသိမ်းဆည်းဖို့..၊ ရေ၊ မီးမှန်ဖို့ အင်ဂျင်နီယာတွေကြံဆပေးရမှာပဲ..။ အင်ဂျင်နီယာဦးလေးကြီးတစ်ယောက်ပြောတဲ့ လုပ်ငန်းများကိုသွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှူဆိုတာမျိူး ရှိကိုမရှိသင့်ဘူးတဲ့..။ ကြည့်ရှူစစ်ဆေးတာမျိူးလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလုပ်ပေးရမှာတဲ့..။ လုပ်ရမှာတွေအများကြီးပဲ..။ လုပ်စရာတွေအများကြီးပဲ..။ ဘယ်ကစလုပ်ရမလဲဆိုတာရယ်..၊ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရယ်..၊ စနစ်ကျကျလုပ်ကိုင်ဖို့ရယ် အများကြီးလိုပါတယ်..။ ဘာပဲပြောပြော ဖြစ်နိုင်ရင် အင်ဂျင်နီယာတွေကို ငွေစုပြီးအိမ်ဝယ်ဖို့ပဲစဉ်းစားမနေဘဲ အများအကျိူးသယ်ပိုးဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်း ထည့်ပေးဖို့ လိုတယ်လို့ ယူဆပါတယ်..။
ဖြစ်နိုင်ရင် အိမ်မှာတူတွေချည်းပဲရှိတာမို့ အသက် ၁၈ နှစ်လောက်မှာ စစ်ပညာသင်ကြားစေချင်တယ်..။ သူတို့ကို ကိုယ်ကာယနဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ကြံ့ခိုင်စေချင်တယ်..။ ယောင်လည်ယောင်လည်နဲ့ စိတ်ကစားနေကြမှာမျိူး..၊ အသုံးအစွဲကြီးကြီးနဲ့ ပေါ်ကြော့နေကြမှာမျိူး မဖြစ်စေချင်ဘူး..။
'အေး' ရေးတာ ဖတ်ရတော့၊ စက်ာပူဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ 'ဂိုချုပ်တောင်' (၂၀၁၀) ခုနှစ်ကပြောတာ၊ ပြောခဲ့တာကို သွားသတိရမိပါတယ်။ 'ဂိုချုပ်တောင်' က၊ NS ဆိုတဲ့ National Service အစီအစဉ်သာမရှိရင်၊ စက်ာပူ လူငယ်တွေဟာ စတော်ဘယ်ရီမျိုးဆက်လူငယ်တွေဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့၊ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်မှာ post - 1980s လို့ခေါါတဲ့၊ (၁၉၈၀) နောက်ပိုင်း မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေကို၊ 'freeters' တွေလို့ခေါါပါတယ်။ freeters ဆိုတာက၊ freeloader ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး၊ လွပ်လပ်ပေါ့ပါးစွာနဲ့ အနှောင်အဖွဲ့ကင်းကင်းနေကြသူတွေလို့၊ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်မှာတော့ 'strawberry generation' လို့ခေါါပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးစ post - second world war ကာလတွေမှာ၊ military school လို့ခေါါတဲ့၊ စစ်ကျောင်းတွေကိုပို့ပြီး၊ လေ့ကျင့် သင်ကြားစေတာမျိုး၊ အမေရိကန်မှာ၊ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှတိုင်းပြည်တွေထဲမှာ၊ စက်ာပူဟာ ၊ NS ဆိုတဲ့ National Service အစီအစဉ်ကို၊ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တာ၊ ဒီနှစ်မှာ (၄၅) နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ အကိုကတော့၊ စစ်မှုထမ်း ဥပဒေအရ၊ ကင်းလွတ်ခွင့်ရပေမယ့်၊ next generation ဖြစ်တဲ့၊ အေး တူကလေး 'သားပု' ကတော့ စစ်မှုထမ်းရမှာပါ။ စစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့် အပိုဒ် (၃) ထဲမှာလည်း၊ ထည့်ရေးထားသမို့၊ အမှတ်တရ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကွန်မြူနစ် လက်နှက်ကိုင် ပုန်ကန်သူတွေ ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ မလေးရှားမှာတော့ National Service အစီအစဉ်ရှိပေမယ့်၊ လူမျိုးရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကြောင့်၊ မဝင်မနေရ စစ်မှုထမ်းဥပဒေအနေနဲ့၊ မပြဌာန်းသေးပါဘူး။ အလားတူ အင်ဒိုနီးရှားမှာလည်း၊ National Service အစီအစဉ်ကို၊ ဘာသာရေးအခြေခံလက်နှက်ကိုင်၊ ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့်၊ မဝင်မနေရ၊ မပြဌာန်းနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်တဲ့ ယောကျာ်းလေးတိုင်း စစ်မှုထမ်းခြင်းဟာ၊ ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းစစ်တွေ ရှိနေတဲ့ အကိုတို့၊ တိုင်းပြည်မှာတော့ မလွယ်လောက်ဖူးလို့ ထင်ပါရဲ့။
မသင်မနေရမူလတန်းပညာရေးဆိုတာထက်.. အခမဲ့မူလတန်းပညာရေးကို လုပ်စေချင်တယ်..။ စာမတတ်တဲ့ကလေးမိဘတွေကို ကလေးတွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်..ဆိုတဲ့ရက်တိုသင်တန်းလေးတွေပေးစေချင်တယ်..။ တက္ကသိုလ်ရောက်သွားတဲ့ကလေးတွေကို အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေဖန်တီးပေးထားစေချင်တယ်..။
Topic နဲ့မဆိုင်ပေမယ့် အမအေးပြောတာလေးတွေ့တော့
သူငယ်ချင်းရဲ့အစ်မ ဆရာမတစ်ယောက်ပြောတာကို သွားသတိရတယ်
အဲဒီအမက ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးနဲ့ မလှမ်းမကမ်းက ရွာတစ်ရွာမှာ တာဝန်ကျတယ်လေ
အစိုးရစစ်တပ်နဲ့နီးနေပေမယ့် အဲဒီရွာလေးက တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအောက်မှာရှိပါတယ်
နယ်မှာဆရာ/ ဆရာမလုပ်ရတာ မလွယ်ဘူးဆိုပေမယ့်
ဆရာ/ ဆရာမရောက်လာရင် နေဖို့အိမ်ပေးပါတယ် ။ ပြီးတော့တစ်ကိုယ်တည်းသမားဆိုရင် ဆရာမဆို မိန်းကလေးအဖော်
ဆရာဆိုရင် ယောင်္ကျားလေးအဖော်ထားပေးပါတယ် ။။ ဒါတင်မက စိုက်ပျိုးလုပ်တဲ့အဲဒီရွာမှာ
ရောက်လာတဲ့ ဆရာအတွက် လယ်တွေ ယာတွေလဲပေးပါတယ် ။
အဲလယ်တွေ ယာတွေပေးလို့ ကိုယ်တိုင်စိုက်ရတယ်မထင်နဲ့ သူတို့စရိတ်နဲ့သူတို့ စိုက်ပြီး သီးနှံပေါ်မှ ဆရာက ယူရုံပါပဲ။
ဒီစားဝတ်နေရေး လုံးခြုံရေးပါမကျန် အကုန်လုံးကို အဲဒီအဖွဲ့အစည်းနှင့် ရွာလူကြီးတွေက စီစဉ်ပေးတာပါ။
ခတ်တာ ပြသာနာက ကျောင်းတက်မယ့် ကလေးမရှိပါဘူး
သူငယ်တန်းကနေ လေးတန်းအထိ အားလုံးပေါင်းလို့ ဆယ်ဂဏန်းမကျော်ဘူးလေ။။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိဘတွေက ဘိန်းစိုက်ပြီး ချမ်းသာကြတော့ သားသမီးတွေကို ကျောင်းမထားပဲ ဘိန်းစိုက်တဲ့ အတက်ကိုသာသင်ပေးပါတယ် ။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဘိန်းခင်းထဲကဝင်ငွေက အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် မယှဉ်နိုင်ပါဘူး
ရှေ့ရေးကိုမြင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းလူကြီးတွေက ကျောင်းမထားမနေရ အမိန့်ထုတ်ပါတယ်
နောက် ကျောင်းတစ်ယောက်မထားရင် တစ်သိန်းရော်ရမယ်လို့ အမိန့်ထုတ်ပါတယ်
ဒါနဲ့ ၁၀ သိန်း သတ်မှတ်ပါတယ် ( လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်လောက်က ပေါက်ဈေးပါ )
ကိုင်းဘယ်နှယ့်လုပ်ကြမတုန်း ဒီရွာမှာ .......
ကျနော် ခင်မိသော ဖိုရမ် အတွက် နှစ်ပတ်လည် မေးခွန်း လေး တွေ ကို ကိုယ်ခံစားမိသလို ဖြေဆိုလိုက်ပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာ ဆိုတာ လောက ကို အလှဆင်သူများ လောက အများ အတွက် ကို တိုက်ရိုက် အကျိုးပြု များလို့ ခံယူပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာများ ရဲ့ ဖန်တီးနိုင်မှု စွမ်းအားကြောင့် လူ.ဘောင်လောကကြီး မှာ များစွာသော အပြောင်း အလဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းသက်သေရှိပါတယ်။သက်ရှိ သက်မဲ့ တို့ရဲ. တိုးတက်မှု ဖြစ်ရပ်များမှာ သိပ် ပံ ပညာရှင် Scientist များကနေပြီး သီအိုရီ အတွေးအခေါ်များ ကို မွေးထုတ်ပေးကြပြီး အဲဒီ သီအိုရီတင်ပြမှုတွေ ကို ထိရာက်အောင် လက်တွေ.ဘ၀ထဲ ခေါ်သွင်းသူများ ကတော့ အင်ဂျင်နီယာ ဆိုတဲ့ ဖန်တီးသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအကြောင်းများ ကြောင့် ထင်ပါတယ် စင်ကာပူ မာစတာ လီကွမ်ယု က ဟောပြောပွဲ မှာ ကျနော်သာ ပြန်ငယ်ခွင့်ရရင် ဆိုတာ ပြောတော့ သူ အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ချင်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် ကတော့ ကျနော် ကို အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ခွင့်ပေးတဲ့ ကံတရား ။ ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အဖေ နဲံ. အမေ ပြီးတော့ တန်ဖိုးထားထိုက်သော ကျနော့် ဆရာများကို ကျေးဇူးအလွန်တင်ပါတယ်။
ဒီဖိုရမ်မှာ ရှိနေအောင် ကျနော့်ကှိုဆွဲငင်ထားတာကတော့ ပြောရရင် စိတ်ကူးယင်တယ်ဆိုကြမယ်။ ဒီဖိုရမ်ရဲ့ နံမယ် အမည်ပါဘဲ ။ အင်တာနက်လောက မှာ ကျနော် အမြင်ချင်ဆုံး စာလုံးပါ
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ် .....ဒါဟာမြန်မာ အင်ဂျင်နီယာများ ကွန်းခိုရာပါ။ ထပ်ကြိုက်မိတာ ကတော့ ကိုယ့်ပညာရပ်တွေကို ကိုယ်မြန်မာဘာသာ စာလုံးတွေနဲ. တွေ.ရခြင်းပါဘဲ ။ ကျနော့်ရဲ့ အလုပ်ချိန် အတွင်းမှာ ကျနော့်ရုံးကွန်ပြူတာ မှာ ဒီဖိုရမ် တခုထဲ ကိုဘဲ မြန်မာ ဘာသာ နဲ့. ဖွင့်ထားလေ့ ရှိပါတယ် ။ အခြားသတင်း ဆိုင်ရာ မြန်မာ ၀က်ဆိုက်များ ကို အိမ်မှာဘဲသုံးပါတယ်။။ ကျနော် လုပ်ငန်း အတွက် software တခုကို ဒီဖိုရမ်မှ ရခဲ့ဖူးပြီး အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ကျန်တာတွေလည်း များစွာရှိပါသေးတယ်။ ကျနော့် ကွန်ပြူတာမှာ မြန်မာ စာလုံးများနဲ. ၀က်ဆိုက် ဖတ်နေတာ တွေ.တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ က ဘာတွေလဲ လို.မေးကြရင် ဒါ မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ် လေလို. ဖြေလိုက်ရတာ ဘာအရသာ ရှိလဲ မမေးနဲ့တော့။ ဘာသာ စကား တိုင်း လူမျိုးတိုင်းမှာ အင်ဂျင်နီယာတွေ ရှိနိုင်ပေမဲ့ သက်ဆိုင်ရာ စကား အလိုက် အင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ် ၀က်ဆိုင်များ ရှိမယ်လို .ထင်ပါသလား။ ကျနော်ကတော့ ဒါ မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ် လို. ၀င့်ကြွားစွာ ဖြေလေ့ရှိပါတယ်။
ကျနော်သိသော အင်ဂျင်နီယာများ ထိတွေ.ဖူးသော အင်ယာများ ဒီ အပေါ်မှာ ကျနော့် စိတ်ထဲ အားမလို အားမရမှာများ ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မျိုးဆက် လူငယ် အင်ယာတွေ အပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ့ ထက် တပည့် လက်စောင်း ထက် မှ လောက တိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ဟာ ကျနော် ဆရာများ သင်ပေးခဲ့တာတွေကို အခုထိ နားမလည်နိုင်သေးပါ ။ ဆရာ့ကျေးဇူးတွေကို ရှေ.ထားပြီး နှိမ့်ချတာ မဟုတ်ပါ ။ကျနော်သည် ဆရာတို့ ထက် အချက်အလက်များ ပိုသိ ပိုရအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ် ။လုပ်လို့ရတဲ့ တန်ဆာပလာများ သုံးစွဲတတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းဖန်တီးခြင်း နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချ ခြင်းတို့ မှာ ဆရာတို့ ကို လိုက်မမှီနိုင်တာပါ။ တခုဆင်ခြင်မိတာ က ဆရာတို. တွေ.ခဲ.ရသော ဆရာများ နဲ. တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့ရသော ကျောင်းနေရာ ၀န်းကျင်တို.ရဲ့ ကွဲပြားမှု.တို.ကြောင့်များလား ထင်မိပါတယ်။ ဆရာတို့ ခေတ်မှာ ပညာတော်သင် သွား တယ် ဆိုတာ အမေရိကန် ထိပ်သီး ယူနီဗာစီတီများဖြစ်ပြီး သူတို.ရဲ. သင်တန်းဖော်တွေကလဲ နိုင်ငံတကာကဖြစ်နေပါတယ်။ ဆရာတို့ အချင်းချင်း အခု အချိန်ထိ စာတွေရေးပြီး ဘာသာရပ် တိုးတက်မှုတွေကို ပြောနေကြတုံးပါ၊၊ ကျနော်တို.ခေတ်မှာ တော. ဒီလိုသွားရတာ မရှိ သလောက်ဖြစ်နေပြါပြီ ။ သွားပြန်တော့လဲ အာရှ ကိုဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ စင်ကာပူ ၊ ကိုရီးယား စသဖြင့် ပေါ. ၊ ဒီမှာ ကွာခြားမှု စနစ် တွေဖြစ်နေပါတယ်။
ကျနော်တို့ နောက်ဖက် လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ မိမိ စားရိတ်စား ကျောင်းနေရတာဖြစ်တော့ ထိပ်သီးကျောင်းတွေ ဆိုတာ စိတ်ကူးယုံဘဲ တတ်နိုင်ပြီး အလွန် နည်းပါးသော အရေအတွက် ကသာ တက်နေကြရပါတယ်၊ ဒါတောင် ပညာ အခြေပြု တိုးမြင့်ဘို့ မဟုတ်ဘဲ စီးပွားတွက် ကိစစတွေ ရှိနေလေ့ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကာလ မှာ အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ.ရသူ အများ စုဟာ အကြောင်း ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာ မလုပ်ရသူ များပြီး တက်ကနီရှင် အဆင့်နဲ.စခန်းသွားနေရတာကို အားမနာတန်း ပြောရမှာပါ။ ကြာကြာလုပ်၇င် သိလာမှာပေါ့လို့တော့မပြောပါနဲ.။ ဆင်ခြင်ကြည့်ကြပါ၊
ခြုံပြောရရင် အားမရ စရာတွေ များစွာရှိနေပါတယ်။ တိုးတက်ဖို့ နည်းလမ်းရှာရပါမယ်၊
အေ၇ာရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်အချို့ကိုလည်း ဖိုရမ်မန်ဘာတစ်ဦးအနေနဲ့ (အင်ဂျင်နီယာများ စကားဝိုင်းမှာ) ၀င်ရောက်ပြောကြည့်လိုပါတယ်။
"တစ်ကယ်ဆို အင်ဂျင်နီယာဆိုတာ ဘာရယ်ပါလို့ အသေအခြာ ရှင်းမပြတတ်ပေမယ့် စိန်ခေါ်လျှင်တိမ်ပေါ်ပဲလိုက်ရလိုက်ရ ဖြေရှင်းပစ်နိုင်မှကြေနပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ အေ၇ာကတော့ အင်/ယာ အလုပ်ဆိုတာ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းတစ်မျိုးပါပဲလို့ (တကယ်ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်) ထင်ရာ ရောချတွေးမိတတ်ပါတယ်။"
"နောက်ပြီးတော့ ပြဿနာဆိုတာမျိုးက ဆက်စပ်ကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိသူတွေအနေနဲ့ အောင်မြင်စွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မဆိုထားနှင့်ဦး ဘယ်ကစလို့ ဘာကိုကိုင်ရမည်မသိ ဖြစ်တတ်ကာ၊ သူတို့တွေအတွက် ခက်ခဲ ပင်ပမ်း အလှမ်းဝေးလှသလောက်/
စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်လေ့လာအဖြေရှာမည်၊ အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းမည်၊ ဆိုသူတွေအတွက် နိုင်နင်းကျော်လွှား ပြေရှင်းသွားစရာ တိကျသေခြာတဲ့နည်းလမ်းအဖြာဖြာတို့လည်းရှိလို့နေတတ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။"
"အဲဒီလိုရှိနေသော နည်းလမ်းအဖြာဖြာ အမွှာမွှာထဲမှ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးဆိုသည်များကို ထိုးထွင်းရှုမြင် ရွေးခြယ်ထုတ်ယူအသုံးချနိုင်ဖို့ဆိုတာက အသိပညာဦးစီးသော အတွေ့အကြုံတို့ဖြင့်ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်သလို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ သရုပ်ခွဲပြီး စိစစ်တွက်ချက် ကြိုတင်အဖြေထုတ် နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေ မလွဲမသွေရှိနှင့်နေရမှာပါ။
ဒါသည်မက လက်တွေ့လုပ်ကြစို့ဆိုလျှင် အခက်အခဲအဖုအထစ်တွေတတ်နိုင်သမျှ ကင်းစင်လျော့ပါးနေစေဖို့ ကြိုတင်မြော်မြင်စီစဉ်ပြီး စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲညွှန်ကြားတတ်တဲ့ အသိတို့ပြည့်ဝနေဖို့လည်းလိုဦးမယ်ထင်မြင်မိပါတယ်။"
"အင်ဂျင်နီယာ ဆိုသူများမှာ (ဆက်စပ်တတ်သိထားစရာတွေ အဘယ်မျှကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းလှသည်ဆိုပါစေ၊) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းမှ အထွေထွေသော လိုအပ်ချက်နှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားအောင်မြင် ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်စွမ်းတွေ (တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအနည်းအများ ကွာခြားတာကလွဲလို့) မသွေမလွဲ အသွေးအသားထဲ ဦးဏှေက်ထဲမှာ တည်ရှိနေကြတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။"
MEF မှာ ဘာသာရေးဆွေးနွေးသူများအတွက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အုပ်ချုပ်သူတို့ရဲ့ တိကျတဲ့ မူဝါဒတွေရှိတယ်၊ ကျင့်သုံးကြတယ်ဆိုတာ ကျော်ကြားလှလို့ အလည်လာရောက်ခဲ့ရာမှ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ ရယူနိုင်တာတွေ မျှဝေဖလှယ်နိုင်တွေ ရှိလို့ မကြာခဏရောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့ ယုံကြည်အားထားချက်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုကြောင့်လဲ MEF မှာ အားတက်သရော ပူးပေါင်းလက်တွဲမိတယ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
"အဲဒါကတော့ နည်းပညာ မွတ်သိပ်နေတဲ့သူများရဲ့တကယ့်လိုအပ်ချက်ကို ဒီအွန်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းက ညီညာထိရောက်စွာ ကိုယ်ကျိုးမဖက် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်တယ်လို့ တွေးမိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ "
"အခွင့်အခါကို ကောင်းစွာအသုံးချလေ့လာတတ်သူ တစ်ဦးခြင်းစီ၏ အရည်အချင်းတိုးတက်မှုမှသည် တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအထိလည်းမျှော်တွေးချင်မိတာပါ။"